Ngaba Ubudlelane Bobuhle Bokuba Kungenzeka Ngoku?
Ingqiqo yekhonkco kukuba ulwalamano oluhle kangaka alukho. Nangona kukho ukuba kukho iinkcazelo ezininzi zeengcamango "zobudlelwane obuhle", akukho mvumelwano malunga nale ngxaki.
Ukuba ubheka kwixesha elidlulileyo, iminyaka engama-40 ukuya kuma-50, uyabona ukuba phantse zonke izibini ezitshatileyo zazidibene kunye nobomi. Cishe kwakungekho ntsala, kwaye phantse zonke iintlobo zinokuthiwa zilungile. Namhlanje imeko yatshintshile kakhulu. Inani leqhawulo lomtshato liye landa, phantse yonke into yesibini okanye yesibini iyahlukana. Kwaye kwenzeka konke ngenxa yokungaqondani komnye nomnye, kungekhona amandla okuphulaphula, indlela yokuqonda isiqingatha sakho sesibini.
Amantombazana amaninzi afuna ukuziqhayisa nokuzimela. Bathanda ukubonisa umlingiswa wabo, kwaye akukho nto ifuna ukunika into ebantwini. Njengomthetho, la ma ntombazana ahlala yedwa ixesha elide, kwaye emva koko bayazibuza ukuba ngaba ulwalamano oluhle lunokwenzeka ngoku. Abakwazi ukuqonda ukuba kwimeko yokuba ulwalamano olulungileyo ngoku alufaki kuphela ngephutha labo.
Nangona ngexesha lethu unokubona ezininzi izibini ezihlala kunye kunye kwaye zivuya. Zonke zihle kwaye zigqibeleleyo. Abantu abaninzi baqala ukukhwelela ubuhlobo bohlobo babo. Kodwa ingqiqo yokuqala iyakhohlisa. Ulwalamano olude olude lwexesha elide lufanelekile. Sibona kuphela igobolithi yezi ntlubano. Apha isibini sihamba epakini, sinovuyo, ubuso babo budibene, beza bethenga kunye kunye, baya kunye ne-cafe. Kodwa asiyazi into esingaphakathi, asikwazi ukujonga ngaphakathi kweli nqabile elihle. Igobolondo langaphakathi lubuhlobo bomntu kunye nomfazi xa bebodwa. Kwaye akusoloko ihamba kakuhle, ihle, njengabantu abaninzi bacinga. Kukho ukuxabana, ukungaqondani, ukuhlambalaza, ukunganeliseki ngezenzo ezithile zesahlulo sesibini. Njengomthetho, konke oku kuhleli kwihlabathi labo elincinci, kwaye kwabanye kubonakali.
Izenzo ezinjalo zinokuthiwa zichanekile. Awunakuze ubonise iingxaki zakho kubantu. Zonke iingxaki kunye nokungaqondani kufuneka zixazululwe kwintsapho encinci. Ubuhlobo obunjalo bunamandla kakhulu, ngokungafaniyo nalapho esi sibini sihlala sithanda ukuxabana size sifumane ubudlelwane nabantwana, izalamane, abaqhelana nabo okanye kwisitalato.
Ngaba ngoku kunokwenzeka ukuba ulwalamano oluhle lukho ngexesha lethu. Ewe kunokwenzeka. Wonke umntu ucinga ukuba ubuhlobo babo buya kuba yinto efanelekileyo. Ukuze ulwalamano oluhle lukho, kubalulekile ukuba babe yintando. Xa uthanda umntu, unokuhlala umxolela iimpazamo ezincinci. Xa kukho uthando olunyanisekileyo, kukho ukuqonda, ukuxhasana, ukuhlonelana. Ukuba ezi zinto zintathu zinokubaluleka kwintsebenziswano, kuya kuba neengxabano ezincinane kunye nokuhlambalaza.
Ukuba udinga ulwalamano olulungileyo, awufuneki ukuxabana malunga nezihlwele. Kufuneka uhlale unako ukufumana ukulungelelanisa kwaye wenze ukuvunyelwa. Ukuba awuyithandi into okanye ungayithandi into ethile kumntu, unokuthi uxoxe ngokuthula.
Ewe, ulwalamano olulungileyo ngoku luyiyo. Abantu baye balibala indlela yokuxabana ngayo. Abaninzi abayayiqondi naluphi uthando kunye nendlela onokuyithanda ngayo. Wonke umntu uzibeka ngaphezu komnye umntu. Bacinga ukuba kuphela iimvo kunye neminqweno yakhe echanekileyo. Kodwa oku akunjalo. Ubudlelwane ngoku, kwihlabathi lanamhlanje, linokwenzeka. Kunokwenzeka xa kwenzeka umntu efunda ukwabelana ngolonwabo novuyo lomnye umntu. Funda ukuhlonipha kuphela iimfuno zabo, kodwa kunye neminqweno yeehafu zabo. Inzala ihluke ngokupheleleyo kumntu wonke, ngoko kubalulekile ukubonisa umdla kwiminqweno yomntu othandekayo. Le nanjalo ingongoma ephambili ebuhlotsheni obuhle.
I-Psychology yobudlelwane: indoda ibetha ibhinqa
I-Charisma - nobuntu obuqinileyo
Indlela yokuyeka ukukhathazeka nokuhlala ngokuthula
Kutheni singazi njani ukukhanyela abantu kunye nendlela yokuyifunda
Indlela yokuziphindezela kumyeni wakho wangaphambili
Ungakuphelisa njani ukudandatheka nokuxinezeleka?
Indlela yokulungiselela isondlo sokuthanda abazali
Iipascake ezifakwe kwi-hack ne-cheese
Iingcebiso ze-acupressure kubantwana
Iimpawu ezisetyenziswayo ze-mackerel
Iziphumo zomncintiswano "I-autumn ekhanyayo" evela kwi-Isotoner nkampani
Konke malunga nokukhetha nokugcina i hamster
Indlela indoda inika ngayo ingqalelo imiqondiso
Isaladi yeklabishi ngeviniga
Imidlalo yemidlalo yabantwana besikolo
UMaria Callas noAristotle Onassis
Usuku lweengelosi: kuyintoni isiko ukwenza?
Bhati ekulweni ne-cellulite
Indlela yokupheka ngokukhawuleza isidlo sesibini semfuyo
Imisebenzi yamadoda kunye neyesetyhini kwintsapho
Ukunyamekela i-yucca ekhaya
Ziziphi iingcali eziza kuba zifunwa ngo-2016, kwaye ziya kuthathwa nini?